Singamaqabane abathengi bethu ukusuka kunxibelelwano lokuqala ukuya kwinkonzo emva kokuthengisa.Njengomcebisi wezobugcisa, sixoxa ngeemfuno kunye nabathengi bethu kwaye siphuhlise izisombululo ezandisa ukusebenza kakuhle kunye nexabiso elongezelelweyo.Kuyo yonke - ikhonkco lenkqubo eqinisekisiweyo ye-ISO 9001 - sinikezela ngesisombululo sesisombululo esinomtsalane.
Ishishini liphumelele isiqinisekiso se-GB / T29490 inkqubo yomgangatho wolawulo lwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
"Itekhnoloji engundoqo, izixhobo ezipheleleyo kunye nokusetyenziswa kwesiqithi / unxweme olusekelwe kwi-high-power ekhethekileyo inkqubo yonikezelo lwamandla" iphumelele ibhaso elikhethekileyo le-China yoshishino loomatshini ibhaso lesayensi kunye nobuchwepheshe.
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza "isixhobo kunye nendlela yokuqonda ukutshintsha ngokungenamthungo koqhagamshelo lwegridi ye-inverter / ukucima igridi" iphumelele iMbasa yaseTshayina yokuGqwesa.
"Ubuchwephesha obungundoqo kunye nokusetyenziswa kombane okhethekileyo we-MW wokuguqula ubuNjineli boNxweme" iphumelele ibhaso lokuqala lebhaso lenkqubela phambili yezenzululwazi nobuchwepheshe.
Ishishini lanikwa ireyithingi "njengeshishini elisemgangathweni lokubonisa ukuziphatha kakuhle".
Ishishini liphumelele "ISO18001 inkqubo yolawulo lwempilo nokhuseleko emsebenzini"
Ishishini lipasise "gjb9001b isixhobo sokulawula umgangatho wesatifikethi senkqubo"
Ishishini lifumene "uphando lwezenzululwazi kunye nelayisenisi yokuvelisa izixhobo kunye nezixhobo" ekhutshwe nguRhulumente woLawulo lwezenzululwazi, iteknoloji kunye noshishino lokukhusela ilizwe.
Ishishini lilinganiswe njenge "Guangdong Intellectual Property Demonstration Enterprise".
Yamkelwa njengeyunithi "yenqanaba lesithathu lesiqinisekiso semfihlo" yiKomiti yaseGuangdong eyimfihlo yasemkhosini.
Uphawu lokuthengisa olubhalisiweyo lweshishini lwanikwa umlinganiselo "njengophawu lwentengiso olwaziwayo lwaseTshayina";
Ishishini lichongwe “njengelinge leshishini lesizwe elivelisa izinto ezintsha”.
Eli shishini laphinda lawongwa ngewonga elithi "ishishini eliphambili lobuchwephesha beSicwangciso seTotshi sesizwe".
Ishishini lilinganiswe njengenye ye-50 "amashishini omqolo oshishino lokuvelisa izixhobo kwiPhondo laseGuangdong".
Ishishini lawongwa ngesihloko esithi "ishishini eliphambili kwiPhondo laseGuangdong".
Ukwenziwa kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza lamandla aphezulu angaphazamisekiyo aphumelele i "China Patent Award Award".
Ishishini lachongwa njengeyunithi esebenzayo "yeKomiti yobuGcisa yobonelelo lombane olungenaziphazamiso yeKomiti yeSizwe yoBugcisa boMgangatho woMgangatho woMbane woMbane".
Ishishini lilinganiswe njenge-AAAA "standardized good behaviour enterprise".
Kwasekwa indawo yokusebenzela yophando lwasemva kobugqirha.
Iimveliso zamandla ezingxamisekileyo ze-EPS zilinganiswe "njengemveliso yegama elidumileyo lePhondo laseGuangdong".
Inkampani yamkelwa njenge "Guangdong ishishini labucala lesayensi kunye nethekhnoloji" kunye "noshishino oluphezulu lwe-Guangdong".
Malunga DET AMANDLA